News Collection: विछोडका गीतले मालामाल अञ्जु
विछोडका गीतले मालामाल अञ्जु
विछोड, पीडा र निराशाका धेरै गीत गाएकी छिन् अञ्जु पन्तले　। उनलाई रातारात चर्चित बनाउने गीत न बिर्संे तिमीलाई पनि विछोडकै गीत थियो　। अहिले एउटा गीत गाउँदा बाह्र हजार, कन्सर्टमा गाउँदा ६०/७० हजार र विदेशमा गएर कार्यक्रम गर्दा दुई लाख रुपैयाँ लिन्छिन् 'व्यस्त' गायिका अञ्जु　।
न बिसेर्ं तिमीलाई न पाएँ तिमीलाई गीतबाट नेपाली संगीत बजार पिटिन् अञ्जु पन्तले　। यही एउटै गीत काफी भयो अञ्जुलाई गुमनाम युवतीबाट रातारात राजधानीको 'मस्ट ह्यापेनिङ सेलिबि्रटी' हुन　। उनको 'सेलिबे्रटी' जिन्दगीचाहिँ कल्पना गरिएजस्तो गुलावी नहुन सक्छ　। 'धेरै मान्छेले चिन्छन्,' हालैको एउटा अन्तर्वार्तामा अञ्जुले भनिन्, 'गाह्रो पनि छ　। ख्याति र प्रचारअनुसारको आम्दानी हुँदैन　। -मानिसका अपेक्षाअनुसार) गायक/गायिकाले आफूलाई मेन्टेन गर्न निकै गाह्रो छ　।'
'प्रशंसकहरूमा सेलिब्रेटीको कमाइलाई विदेशीसँग तुलना गर्ने सोच छ,' उनले भनिन्, 'टिभीमा मात्रै देख्दा उनीहरूले के- के न होला त्यो गायिका भन्ने ठानेका हुन्छन्　। अनि भेट्दाचाहिँ त्यस्तो हुँदैन किनकि म पनि त सामान्य मान्छेको सामान्य जिन्दगीबाट माथि उठ्दै त छु　।'
नेपाली सांगीतिक संसारमा बजार र मिडियाको अभुतपूर्व संयोजनबाट प्रत्येक महिना अञ्जुजस्ता 'रातारात सेलिब्रेटी'को जन्म भइरहेको छ　। यो समीकरण गज्जबको छ- बजारमा क्यासेट सिडी पठाएकै क्षण टिभीमा म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिन्छन्　। गायक/गायिका एफएम रेडियोहरूमा उपस्थित हुन्छन् अन्तर्वार्ताका लागि　। पत्रपत्रिकामा फोटो छापिन्छन् र वेबसाइटहरूमा 'वालपेपर' आकारका फोटोसँगै अन्तर्वार्ता निस्कन्छन्　। बजारीकरणको यो 'प्याकेज'ले उपभोक्ता एकैपटक यस्तरी घेरिन्छ कि ऊ त्यो गीत सुन्न, हेर्न र किन्न बाध्य हुन्छ　। 'पहिले-पहिले गीत श्रोतासम्म पुग्न कि रेडियोमा बज्नुपथ्र्यो कि त कुनै कार्यक्रम नै आयोजना गरिनुपथ्र्यो,' अञ्जु भन्छिन्, 'आज गायक, श्रोता र दर्शकमाझ भिडियोमा प्रस्तुत हुन्छ, टिभीमा देखिन्छ　। धेरै मानिसले एकैपटक चिन्छन् र उसका बारेमा चर्चा हुन थाल्छ　।' त्यो 'चर्चा' गीत हिट भएको लक्षण हो, जब बच्चा, युवा, बूढा सबैले चियापसलमा समेत कुरा गर्न थाल्छन्　। अञ्जुको भनाइ छ, 'बजारमा उसको एल्बमको बिक्री राम्रो हुन्छ र गायक मिडियामा छाउन थाल्छ भने उसलाई सफल भएको मान्नुपर्छ　।'
अहिले अवस्था यस्तो छ- गीतमा स्तर भनेको त्यस्तै हो, बजारचाहिँ पिट्नैपर्छ　। स्तरीयताको नाममा शब्द, संगीत, स्वरमा मात्रै ध्यान दिएर के गर्नु ? उनीहरूको विचार छ- बजारमा चलेन भने त्यो 'स्तरीयता'को के काम ? कुशल होइन, तन्नेरी गायकहरूको सोचाइ छ- सफल गायक हुनु अहिलेको आवश्यकता हो　। 'गायक/गायिकाले बजार पनि बुझ्नुपर्छ,' अञ्जु भन्छिन्, 'वर्तमान अवस्थामा कस्तो गीत चल्छ भन्ने थाहा पाउने नै हिट बन्छ　।' 'सांगीतिक सौन्दर्य' होइन बजारको मागअनुसार गीत गाएमा हिट होइने कुरा अञ्जुले पनि बुझेकी छिन्　। 'तर, गीतमा स्तर त चाहिन्छ नै,' अञ्जु भन्छिन्　। अञ्जुका गीतमा त 'सांगीतिक सैन्दर्य' पनि भेटिन्छ नै　। नभए अञ्जुको सांगीतिक उचाइ कसरी
चुलिन्थ्यो ? अञ्जुलाई लाग्दो रहेछ- नेपालमा धेरै राम्रा गायक/गायिका छन्, जो आफ्नो सन्तुष्टिका लागि गाउँछन्　। वास्तवमै सफल हुनलाई बजारको सन्तुष्टिका लागि पो गाउनुपर्ने रहेछ　। 'कलामात्र भएर भएन,' उनी भन्छिन्, 'बजारको मागलाई पनि पहिचान गर्नुपर्छ　।'
नारायणगोपालका गीतहरू यसकारण स्तरीय थिए कि उनी गहिरा भावना मिसिएका गीत गाउँथे　। अञ्जुचाहिँ आफूले गाउने गीतको छनोट कसरी गर्छिन् ? 'स्तरीय गीत गाउन त मलाई पनि मन लाग्छ　। तर, त्यो रहर पूरा भएको छैन,' उनले भनिन्, 'तर, म कसैलाई पनि भेद गर्दिनँ, गाउन पाए पुग्यो　।' जुनसुकैखाले गीतमा पनि उनी पूरै डुब्न सक्छिन्　। रिमिक्स, पप, भजन, चलचित्र सबैखाले गीतमा उनी 'राम्रै' जमेकी छिन्　।
भर्खरै अञ्जु दुईमहिने टुरमा अमेरिका गइन्　। फर्केर आएर फेरि इजरायल गइन् र फेरि कतार　। 'गीत गाएर फुर्सदै छैन,' अञ्जु भन्छिन्, 'देश-विदेशबाट निम्तो आइरहेको हुन्छ कार्यक्रमको　।' यी गायिका यति व्यस्त हुन्छिन् कि कसैलाई भेट्ने वा कतै गएर सुस्ताउने उनलाई फुर्सद छैन　। 'दिनको औसत तीनवटा गीत रेकर्ड गराउने गरेकी छु,' उनी कति व्यस्त छिन्, यही भनाइले पुष्टि हुन्छ　।
आँखामा गाजल लगाएकी, ओठमा लाली लगाएकी, नीलो जिन्समा सजिएकी यी 'दुब्ली' गायिकाका फ्यान बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्म छन्　। 'साना बच्चादेखि बूढासम्मको 'आई लभ यु' लेखिएका एसएमएस आउँछन्,' यी नत्थीवाली गायिका आफ्नो उमेरभन्दा साहै्र कम लाग्छिन्　। अझ उनलाई 'बिहे गर्छु' भन्ने केटाहरू पनि गनिनसक्नु छन् रे　। 'धेरैले त फोन गरेर दिक्क लाउँछन्,' उनले भनिन्, 'बुटवलका एकजना फ्यानले मेराबारेमा कविता लेखेका रहेछन्, केही समयअघि फोनमा सुनाएका थिए　।'
संसारमा सबैभन्दा बढी माया नौ वषर्ीया छोरी 'परितोषिका' र आमा मनु योञ्जनको लाग्ने बताउने अञ्जुलाई धेरैले 'मेलोडी क्विन' पनि भन्छन्　। १३ वर्षदेखि सांगीतिक बजारमा उनको यात्रा अविरल छ　। रेडियो नेपालमा आधुनिक गीत प्रतियोगितामा प्रथम भएपछि उनी झ्याम्मै हामफालिन्, सांगीतिक संसारमा　। उनको प्रेमविवाह भयोे, गायक/संगीतकार मनोजराजसित -जो अहिले अमेरिकामा छन्)　। हरेकपटकको अन्तर्वार्तामा उनी श्रीमान्ले आफूलाई निकै माया गर्ने गरेको र आफ्नो सांगीतिक यात्रामा श्रीमान्को योगदान निकै भएको सुनाउँछिन्　।
०६० सालमा पति मनोजसँग उनको 'गाथा' एल्बम बजारमा आयो　। 'संयोग' एल्बममा अञ्जुले भारतका चर्चित गजल गायक जगजित सिंहसँग पनि गीत गाइन्-'कस्तो माया देखेँ आज टप्प टिपुँजस्तो'　। तर, यो गीत छुट्टाछुट्टै रेकर्ड गरिएको थियो　। 'जगजित सिंहसँग फोनमा चाहिँ कुरा भएको थियो, उहाँले 'निकै राम्रो गाउने रहिछौ' भनेर आशीर्वाद दिनुभयो,' उनले भनिन्　। अञ्जुले यति छिट्टै समयमा तीन सय बढी नेपाली फिल्ममा गीत गाइसकेकी छिन्　। ०६३ मा अञ्जुको रिमेक गीतिएल्बम 'कम्पन' आयो　। तर, अचम्म, अञ्जुको सोलो एल्बम एउटा पनि छैन　। उनी पाश्र्वगायिका र 'स्टेज पर्फर्मर' हुन्　।
अञ्जु अहिलेकी सबैभन्दा महँगी गायिका हुन् भन्ने चर्चा व्यापक छ　। अरूको एल्बममा एउटा गीत गाएर कति
पाइन्छ ? 'त्यही हो १२ हजार रुपैयाँ लिन्छु, त्योभन्दा धेरै वा थोरै लिन्न,' अञ्जुले भनिन्　। काठमान्डूबाहिरको कार्यक्रममा गाएको एकपटकको ६०-७० हजारसम्म लिन्छिन् रे　। अनि विदेशमा गाएको नि ? 'दुई लाखसम्म लिन्छु,' उनले भनिन्　। अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेलायतबाट यस वर्षका लागि कार्यक्रमको अफर आएको बताइन् अञ्जुले　।
उनको यो गीत पनि अहिले निकै चलेको छ-
उनको स्वर वियोगान्तमा बढी खुल्छ　। 'आजकाल चलेकै यही वियोगान्त गीत हो,' अञ्जु पन्तको लालीओठ फक्रिए, 'मान्छे सबैमा निराशा छ र दुःख छ, धेरैलाई यस्तै वियोगान्त गीतले छुँदो रहेछ, त्यसैले यस्तै गाएकी मैले पनि　।' अञ्जुले दुई वर्षअघि छिन्नलता नवप्रतिभा पुरस्कार, कान्तिपुर टेलिभिजन र एफएमबाट अवार्ड पाएकी थिइन्　। अन्नपूर्ण एफएम, हिट्स एफएम आदिबाट उनले दर्जनौँ पुरस्कार पाएकी छिन्　।
अञ्जुजस्तै पहिले बजार पिटेर पछि गायब हुने गायक/गायिका पनि नेपालमा नभएका होइनन्　। गीतले दिलाएको स्टारडममा रमाइरहेकी छिन् अञ्जु　। आफ्नो क्षमताको वास्तविक परीक्षण 'श्रोताले' गरिसकेको ठान्छिन् उनी　। भन्छिन्, 'श्रोताको मायाबाट मिल्ने आनन्दको स्वाद कम्ती मीठो हुँदैन　। यसले मेरो जीवनमा रमाइलो र उमंग थपिरहेको छ　।'